बल्लतल्ल मिल्यो भागबण्डा : कसको भागमा कति मन्त्रालय? (सुचिसहित) | Khash Khabar
गृह बल्लतल्ल मिल्यो भागबण्डा : कसको भागमा कति मन्त्रालय? (सुचिसहित)
बल्लतल्ल मिल्यो भागबण्डा : कसको भागमा कति मन्त्रालय? (सुचिसहित)
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार १९:२४
काठमाण्डु – सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले मंगलबार मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् । असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको शेरबहादुर देउवाले हालसम्म भागबण्डा नमिलेकै कारणले सरकारलाई पुर्णता दिन सकेका छैन् । तर स्रोतका अनुसार आज भने सत्तादर नेताहरुले भाडबण्डा टुंगो लगाएका छन् ।
आज विहान सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको नेताहरुले बताएका छन् । सहमतिअनुसार सरकरको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । हाल उसले गृह, परराष्ट्र र कानून लिइसकेको छ अब उसले सञ्चारसहितका मन्त्रालय लिनेछ । माओवादी केन्द्रको भागमा ५ वटा मन्त्रालय परेको छ । उसले अहिले अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेको छ । अब उसले शिक्षासहितका मन्त्रालय पाउनेछ ।
एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समान चाररचार मन्त्रालय पाउने छ । जसपाले भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन र कृषि मन्त्रालय पाएको छ । जसपालाई उपसभामुख, अरुलाई राज्यमन्त्री एक नेताका अनुसार सत्तारुढ दलहरुबीच राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद पनि भागवण्डा भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एकएक राज्यमन्त्री लिएको छ भने जसपाले उपसभामुख पाउने लगभग सहमति भएको एक नेताले बताए ।